Dowladda Jabuuti oo xidhey Dad uu ku jiro Wasiirkii hore ee Owqaafta iyo Arrimaha Diinta Jabuuti. |
Dowladda Jabuuti oo xidhey Dad uu ku jiro Wasiirkii hore ee Owqaafta iyo Arrimaha Diinta Jabuuti.
Dowladda Jabuuti ayaa maanta sheegtay inay ku soo oogtay dacwado la xiriira rabshadihii ka dhacay Jabuuti 32-qof oo uu ku jiro Wasiirkii hore ee Owqaafta iyo Arrimaha Diinta Jabuuti, Xaamud Cabdi Suldaan oo kasoo baxay isbitaal looga daweynayay dhaawac ka soo gaadhay rabshad 21-kii bishan December ka dhacay magaalada Jabuuti.
Xeer-ilaaliyaha guud ee Jabuuti, Maki Cumar C/qaadir ayaa sheegay in dadkan la xiray lagu soo oogay inay ka dambeeyeen dacwado la xiriira rabshadihii Jabuuti ka dhacay bishan, isagoo xusay inuu ku jiro wasiirkii hore ee arrimaha diinta iyo owqaafta
“Way badan yihiin dadka la xidhxidhay balse, 32-qof oo ka mid ah ayaan dacwado kusoo oognay, kuwaasoo qaarkood laga qabtay halkii ay rabshaduhu ka dhaceen, kuwo kalena loo haysto inay ka dambeeyeen abaabulkii rabshadihii Jabuuti ka dhacday, waxaana dadkan ka mid ah; C/raxmaan Maxamed Geelle iyo Xaamud Cabdi Suldaan,” ayuu yidhi xeer-ilaaliyaha Jabuuti oo la hadlayay VOA-da.
Sidoo kale, xeer-ilaaliyaha guud ee Jabuuti ayaa hadalkiisa ku daray in wasiirkii hore iyo mas’uulka kale ee loo haysto inay soo abaabuleen rabshadaha la xiray shalay oo Arbaco ahayd, maanta oo Khamiis ahna ay soo xireen ruux kale oo lagu magacaabo, Cumar Cali Ciwaado oo qoray warbixin been abuur ah oo uu ku buun-buuniyay tirada dadkii ku dhintay iyo kuwii ku dhaawacmay rabshadihii ka dhacay Jabuuti.
“Waxaan uga digaynaa shacabka Jabuuti in marka ay isticmaalayaan baraha ay ku xirdhiidhaan bulshada ay iska ilaaliyaan inay dambiyo ku galaan,” ayuu hadalkiisa ku daray xeer-ilaaliyaha guud ee Jabuuti.
Dhanka kale, afhayeenka dalladda mucaaradka Jabuuti ee USN, Daahir Axmed Faarax oo isagana la hadlayay VOA-da ayaa sheegay inay walaac xooggan ka qabaan xarigga wasiirkii hore ee owqaafta iyo arrimaha diinta Jabuuti, isagoo sheegay inuu qabo dhaawac uuna maalin walba u baahan yahay inuu dhakhtarka la kulmo.
Afhayeenka mucaaradka ayaa intaas ku daray in xabsiga lagu xidhay mas’uulkan xabsiga Gabood, kaasoo uu sheegay innaney ahayn meel maxaabiista ku xidhan ay heli karaan dawooyin, taasna ay tahay sababta ay xaaladdiisa walaaca weyn uga muujinayaan.
“Ciidamada booliiska maalmahan oo dhan ayay hor-taagnaayeen isbitaalka uu ku jiray Xaamud Cabdi Suldaan, dadka oo dhan ayayna u diideen; waxayna u ogolaadeen oo keliya xaaskiisa,” ayuu hadalkiisa ku daray Daahir Axmed.
Ugu dambeyn, rabshadihii toddobaadkii hore ka dhacay magaalada Jabuuti ee xarunta Jabuuti ayaa waxaa la sheegay inay ku dhinteen 19-qof oo shacab iyo askar isugu jira, sidoo kalena ay ku dhaawacmeen 75-qof oo kale.